Chickpea saladi nesalmoni, avocado uye zvinotapira | Kicheni Mapepa
Chickpea saladi nesalmon, avocado uye mbatatisi
Hazvina basa kuti uzviomesere kuti unakirwe chikafu chine hutano panguva yekudya. Legume saladi Ivo vakagadzirirwa mune zvishoma inopfuura maminetsi gumi uye ivo vanova imwe nzira yakanaka kune iwo mazuva asina nguva umo, zvisinei, isu hatidi kusiya chero chinhu.
Iyo chickpea saladi ine salmon, avocado uye mbatata ingori imwe yemasanganiswa mazhinji aunogona kugadzira. Unogona kuzvirega uchitakurwa nezvaunofarira kana seni nekudiwa kwekutora mukana izvo zvakasara zvaunazvo mufiriji. Mune yangu nyaya one salmon slice akachekwa husiku hwapfuura uye avocado yakaibva.
Iwe unogona kushandisa dzakaomeswa nhokwe kugadzirira chikafu ichi uye kudzibika mune yekumanikidza yekubika, kana iwe unogona kukanda imwe yeiyo zvirongo zvehuku dzakabikwa ndakabatsira. Kana ukangounganidza zvese zvinoshandiswa mumudziyo kana saradhi mbiya, uchafanira kuzvipfekedza. Ini ndinoda kuigadzira ine basic vinaigrette uye zvishoma paprika. Uye newe?
Iyo chickpea saladi ine salmon, avocado uye mbatatisi yandinofunga nhasi inonaka uye ine hutano. Yakakwana chikafu.
100 -120 g. chickpeas dzakaomeswa, dzakabikwa
12 Cherry matomati
½ tsvuku hanyanisi
Tinosvuura mbatatisi, tinoicheka kuita madhishi kana zvimiti 1,5-2 cm gobvu uye tinoenda nayo kuchoto pa180ºC kusvikira yanyorova: hapana anopfuura hafu yeawa.
Mune imwechete yekubheka tireyi yakaputirwa mune albal bepa, kana yakagochwa, isu tinobika saroni nyowani maminetsi mashoma.
Kunyange, tema hanyanisi nemhiripiri ndokucheka madomasi e cherry muhafu.
Gare gare mutsime tinobatanidza nhokwe dzakabikwa (yakashambidzwa uye yakadururwa vasina iwo makoni akabikwa mugaba) nezvinosanganiswa zvichangobva kuchekwa, mbatatisi yakagochwa, salmon yakabwinyiswa uye avocado.
Mwaka nepaprika, maorivhi uye vhiniga, isu takasanganisa uye takanakidzwa neiyo chickpea saladhi nesalmon, avocado uye mbatatisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Zvidyo » Salads » Chickpea saladi nesalmon, avocado uye mbatatisi